Miisaaniyadda Guga ee Xisbiga S - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Miisaaniyadda Guga ee Xisbiga S
La daabacay onsdag 25 april 2012 kl 13.06
Stefan Löfven iyo Magdalena Andersson. Sawirle: Leif R Jansson/Scanpix.
Xisbiga Sooshiyaadimoqoraadiga ayaa miisaaniyaddiisa xilliga guga ku soo ban-dhigay qorshe ku kacaya laba milyaard oo koron ee la xiriira shaqo iyo heshiis wax-barasho. Qorshahan ayaa meeleeyn doona muddo sannad ah 10 000 oo ruux laguna miisaaniyad-gelin doono iyada oo la baabi'iyo dhimista qidmadda shaqaaleeynta ee dhallin-yarada ee dawladda iminka maamulka dalka faraha ku heeysa, sida uu sheegay hogaamiyaha xisbiga (S) Stefan Löfven.
Löfven ayaa ku macneeyay in siyaasadda shaqo ee xisbigiisu ku taagan yahay saddex tiir oo midka ugu horeeyaa yahay in salka loo dhigo nidaamka dhaqaale wee dalka. Midda labaad ee hogaamiyuhu kor u qaadayo ayaa ah siyaasadda manaafacaadka iyo fikradaha cusub iyo markaa kadib oo xoogsatada lagu qalabeeyo culuun iyo farsamo ku habboon.
Waa howl masuuliyad ay ka saaran tahay bulshada iyo ruuxa qudhiisa, sida uu qabo Stefan Löfven.
Qorshahan ayaa loogu magac daray "utbildningskontrakt - heshiis tacliineeka" dhallin-yarada, sida ay sheegtay Magdalena Andersson, af-hayeenka dhanka siyaasadda dhaqaalaha ee xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadiga.
Goolka laga leeyahay ayaa ah in dhammaan ey dadku gaaraan shahaado ey kaga baxeen dugsiga sare ugu dambeeyn inta aaney dhaafin da'da 25-an. Qeeyb ka mid ah goolkaa ayaa ah in 95% dhallinyarada da'doodu u dhaxeeyso 18-24 ey ka baxaan dugsi sare sannadka 2020.
Qorshooyinka ayuu sidoo kale ka mid yahay tababar loogu tala galay dhallin-yarta aan gaarin da'da 25 ee haysta shahaado dugsi sare. Waxaa sidoo kale lagu casumi doonaa dhallin-yarada haysata shahaado wax-barasho sareee aan da'doodu ka wayneyn 29-an. Goolka middaa laga leeyahey ayaa ah sidii gacan looga siin lahaa shaqa-bixiyaha shaqaaleeya dhallin-yarada shuruudaha noocaniya buuxisa.